Ukusetyenziswa kwescreen selanga kunye nokufika kwehlobo. Iingcebiso | Amadoda aQinisekileyo
Ihlobo lilapha. Kwaye iyafana nelanga, ulwandle, isanti. Yi intsomi exhaphakileyo yokuba amadoda awadingi, njengabafazi, ukukhathalela ulusu lwawo ngokukodwa. Kodwa izinto zaqala ukutshintsha kudala.
Ngalo lonke ixesha kukho ukuqonda okungaphezulu kwesidingo sokusebenzisa umkhuseli olungileyo Ilanga. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, kubalandeli bendawo yokuhlambela elungileyo. Ngalo lonke ixesha zama ukunqanda iiyure zosuku ngezehlo eziphezulu zelanga, ezo zijikeleze emini emaqanda.
1 Kutheni usebenzisa i-sunscreen
2 Zeziphi iimveliso oza kuzisebenzisa
3 Thambisa into yokuthambisa elangeni emva kokucheba
Kutheni usebenzisa i-sunscreen
Kukho izizathu ezintathu eziphambili: siya kukuphepha imibimbi nokwaluphala ulusu ngaphambi kwexesha, siya kunciphisa iziganeko zamabala okanye i-melanomas, kwaye baya kubakho umngcipheko omncinci womhlaza yesikhumba.
Zeziphi iimveliso oza kuzisebenzisa
Oogqirha besikhumba bacebisa ukusebenzisa iifomula ezibanzi zeSpectrum. Ithetha ntoni le nto? Bazintoni iimveliso eziza kukhusela i-dermis ngokuchasene neentlobo ezimbini zemitha yelanga eyingozi emzimbeni wethu: i-UVA kunye ne-UBV.
Ukuba ufuna imveliso ngaphandle kwevumba elininzi, kukho iintetho kwintengiso leyo abafaki ivumba.
ukuba Ulusu olunamafuthaIijeli okanye iintetho zokutshiza zilungile, kunye ne iifomula zamanzi- okanye ezinxilisayo kunye neoyile. Kukho ezininzi Iimveliso zesiphumo sematte, Ukuphepha ukukhanya kakhulu xa sigqatswa lilanga kakhulu.
Iimbaleki, kukho izithambiso zelanga ezikhethekileyo ezenzelwe la matyala. Banikezela nge ukufakwa ngokukhawuleza okukhulu, ukunqanda ukuba izandla zinamafutha, nto leyo inokwenza kube nzima ukubamba irakethi, kwimeko yentenetya, umzekelo.
Kwaye kuphephe ukuphela ngamehlo acaphukisayoKucetyiswa ukuba kusetyenziswe ebunzini nasekujikelezeni kweeliso (ungaze wenze iinkophe), bamba iintetho.
Thambisa into yokuthambisa elangeni emva kokucheba
Ingcebiso evela kugqirha wesikhumba yile faka i-sunscreen emva kokucheba kwinkqubo yakho yasekuseni nangaphambi kokusebenzisa izinto zokuthambisa. Ulusu lobuso bethu luyakuxabisa.
Imithombo yemifanekiso: NdinguRadiant / Analytical
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Ukufika kwehlobo. Izinto ezikhuselwe lilanga